Halkee si ay u iibsadaan Kiniinka Dianabol & Dbol Sharci – Health and Sports Supplements
Health and Sports Supplements » Steroids » Halkee si ay u iibsadaan Kiniinka Dianabol & Dbol Sharci
Dianabol waa magaca ganacsiga ee Methandrostenolone ah, oo waxaa inta badan loo by foosha magaca in – dbol. Waa steroid ah dhiska hore horumariyo Germany ka hor ay sii daayo by Rafaa dawooyinka American, Ciba, 1960.
Dbol ugu dhakhsaha badan u noqday caan la bodybuilders oo ahaa ballaaran la heli karo iyada oo aan qoro ilaa xad dhawaan. Its ugu caansan user waqti-dheer, ka hor waxaa la mamnuucay in Maraykanka, waxay ahayd Arnold Schwarzenegger. Its sale hadda labada xaddidan ee Maraykanka iyo UK.
Dianabol waa daroogada qaab-qaadidda in si dhaba loo arki karaa kaadida oo isticmaalaya gaaska spectrometry chromatography-mass. Waxaa la magaacabay walaxda la kantaroolo ee US, UK iyo dhan Western Europe, laakiin uu weli la heli karo iyada oo aan qoro ee Mexico, Asia iyo dhowr dal oo yurubta bari.
Sidee Dbol shaqeeyaan?
Dianabol ka qayib Hormoonkaas, taas waa hormoon steroid ee jidhku u isticmaalo horumarinta nidaamka taranka lab. Waa wax ku ool ah ee jirka ku-buildin g maxaa yeelay waxa ay ku xidhaa si antiandrogen receptors unugyada muruqa gudahood, iyo habkan kor wayneeyo murqaha lafaha by keentay abuurista borotiinada contractile.
Users ay u badan tahay in ay la kulmaan miisaanka weyn faa’iido (inta u dhaxaysa 8 iyo 15 pounds in wareegga 8 toddobaadka ah), inkastoo qaar ka mid ah tan (ka 20-50%) lagu lumin doonaa mar wareegga uu dhamaado. Waa kuwan saamaynta dhiska xoogan oo Dianabol sameeyaan sidaas oo caan ah, oo taasu waa dhisaha awood leh mass taasoo soo saari karaan saamaynta arrin la yaab leh in dhisaa jirka ee wareegga bulking ah.
waxbarashada Clinical xaqiijiyo isticmaalka in Dianabol by ciyaartoyda lab dhexdhexaad ah waxay kordhisaa xoog iyo waxqabadka. Kuwa ka qaybgalayaasha la siiyey daroogada helay miisaanka, oo halkaasna waxaa joogay kordhay heerarka potassium iyo aragti muruqa (eeg http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7018798).
Waxaa la rumeysan yahay in ciyaartoyda dishibiliin kuwa culus tababar oo raaca cunto calorie sare nafaqo u dhawdihiin inaad sida ugu badan ee laba jeer mass muruqa laba wareeg bil ah in ay si kale loo gaaro lahaa sanadkii marayo tababar degdeg keligaa ayaa ah.
Sidee loo Dianabol by dhisaa jirka isticmaalo?
Dianabol waxaa loo isticmaali karaa oo keli ah, ama in lala steroid ah isku duro. A caadiga ah wareegga of dbol steroids dhaxayn lahaa faafidda 10-50mg maalintii oo dhan ee u dhexeeya saddex iyo shan dura saac.
wareegyada Dianabol-kaliya waa ugu badan ee ka mid ah kuwa bilawga shaqo ama dhismaha jirka taliskii ciyaaraha fudud, iyo kuwa nacay steroids isku duro.
Inta badan dadka isticmaala leenahay dbol la steroids kale isku duro, caadi ahaan nandralone ama testosterone. Waxaa la rumeysan yahay in d-Bol si weyn u wanaajisaa saamaynta ku steroids mudaa.
Ma jiraan waxyeellooyin la xidhiidha Dianabol?
Inkastoo kordhiya firfircoonida saamaynta deg deg ah ee D-Bol, dadka isticmaala laga yaabaa in ay la kulmaan dhowr ah oo waxyeelo ay ka mid yihiin awood darro, finan, qoto codka, heerka kolestaroolka kacsantahay, atrophy Testicular, timaha jirka kor u kacay, dibiro, haynta biyaha iyo u goynina, hannaankii lab.
Sida D-Bol kordhiyaa masculinisation , waa in aan loo qaadan by haweenka. Markii ugu horeysay waxaa la sii daayay, 1960, waxaa lagu si joogto ah u qoro sida tonic ah loogu tala galay dumarka. Saamaynta masculinising ahaayeen ugu dhakhsaha badan wax iska cad, iyo isticmaalkeeda waxaa si deg deg ah la joojiyo.
kiniiniyada Dianabol sidoo kale saameyn niyadda: waxaa laga yaabaa in la kordhiyo gardarada iyo dadka isticmaala badan soo sheegaan dareen ah ladnaanta halka qaadashada daroogada, raaceen by-jabka xooggan mar wareegga ka baxayo.
isku dhafan ee bulking degdeg ah inta lagu guda jiro wareegyada D-Bol, oo ay la socdaan murugada ah in waayo-aragnimo badan oo mar wareeg dhameeyo, waxay keeni kartaa in isticmaalka caadaysi Dianabol, tan dadka isticmaala si aad u wanaagsan iyadoo u qaadan dareemaan.
Extended ama isticmaalka muddada-dheer ee kaniiniga Dianabol si weyn u kordhiyaa halista waxyeellada beerka tan Dianabol waa hepatoxic. Waayo, dadka isticmaala inta badan, beerka soo laabtay si caadi ah mar D-Bol la joojiyo. Sida laga soo xigtay dib u eegista dianabol xad-dhaaf ah , waxyeelo weyn oo aan si caadi ah u dareentay bixinta waxaa dhan ordeen waqti off daroogada.
Halkee D-Bol waxa loo isticmaalaa dhismaha jirka waa muhiim in xubnaha, iyo gaar ahaan beerka, waxay leeyihiin waqti ay ku soo kabsadaan ka dib Dhammaadka wareegga ah. Waayo, kan dadka isticmaala qaar ka mid ah qaado caanaha laga soosaaray yamaaruggii ku caawisaa oo dayactir waxyeelo unugyada beerka.
Ma sharci baa in la qaato Dianabol?
The xayiraad on Dianabol bilaabay in Maraykanka, iyadoo Congress marayay Act dhiska isteeroydhiska Control ee 1990.
Tani beddelay Sharciga Ashyaada Mukhaadaraadka iyo methandrostenolone ah markii ugu horeysay kaalinta (d-Bol) ee category la mid ah sida amphetamines. Haysashada noqday dambi ee dalka Mareykanka laga bilaabo taariikhda in.
In UK xaaladda ay tahay mid ka yara duwan. Inkastoo steroids waxaa loo kala saaraa sida daroogada Class C a hoos u Xun Drugs Act 1971, waxaa weli sharci si aad u hantidaan daroogada loo isticmaalo shakhsi kastoo aan sharci si ay u keento in qof kasta oo kale.
xayiraad dheeraad ah ayaa la soo bandhigay in April 2012 on dejinta ee steroids. Tani waxa ay ka dhigtay in ay sharci darro in ka websites internet ama amar mail iibsan kiniinka Dbol. Hay’adda Xuduudka ee UK ayaa lagu baray inay dhexda oo qabta xitaa isticmaalka tiro shakhsi ahaaneed ee d-Bol yimid boostada ama dhiibay warqaadayaal at dhibcood ee laga soo galo.
Ma Dianabol qaaday hadal sida wax ku ool ah sida steroids duro?
Jawaabtu waa mid fudud haa. Marka hore waxaa jiray dhibaato la xiriirta maamulka afka ah steroids, maxaa yeelay, isagoo soo maray mareenka caloosha iyo mindhicirka, daroogada wuxuu u baabbi’i lahaa by beerka ka hor inta uu geli karin dhiigga. Dianabol waxaa loo habeeyey, by daray kooxda 17A-methyl ah, si ay u caawiyaan steroid ka badbaadaan, sidaas maanta, Maamulka afka of Dianabol noqon doonto sidii wax ku ool ah sida steroid ah isku duro.
heerarka sare ee Dianabol qaaday hadal waxyeellayn karaan beerka, taas oo ah sababta ugu wayn ee ciyaaraha fudud badan door bidaan si aad isugu durto muruqa (steroids waa in aan marnaba la mudaa xidid ku). Si loo yareeyo halista waxyeellada beerka qiyaasta maalinle ah 50mg waxaa lagula talinayaa. Khatarta ay leedahay hepatotoxicity dheeraad ah waxaa lagu yarayn karaa iyadoo la isticmaalayo supplements nafaqo sida caanaha Thistle ama Liv-52.
Halkee si ay u iibsadaan Dianabol iib sharci?
Si aad u sii sharciga gudahood, users u baahan tahay si aad u iibsato daawada dalka halkaas oo ay si sharci ah on sale waa, ka dibna si shakhsi ah u soo laabto UK qaado. isticmaalka Personal waxaa lagu qeexaa sida ilaa sahayda lix bilood ah ‘.
In kasta oo xayiraad sharci, Dbol for sale on goobaha internet weli waa dhibaato ballaaran. Qof kasta oo ka fiirsaneysa inay u geliya amar waa inay ogaadaan in this daroogada la dhexda laga yaabaa , iyo in loo helo celiyo duruufaha kuwa u badan tahay lahaa caddayn macquul aheyn. Hoos Scroll si aad u aragto kale noo talinayaa.
Note A dheeraad ah digniin ay tahay in tiro ka mid ah website-yada ayaa lagu iibiyo waxa sheegtay inuu yahay Ruush Dianabol, laakiin taas ayaa cadeeyay inuu yahay been-abuurka ah. Waxaa cad, isticmaalka dawooyinka been abuurka ah waa heer sare ah oo khatar ah, iyo mar kale, siin nooca sharci darro ah macaamilka, kuwa adaaegatada yeelan doonaan aysan keenin wax sharci ah.
Ma jirtaa si kastaba agagaarka this? – Halkee si ay u iibsadaan a kale Dianabol sharci
Waxaa jira tiro ka mid ah supplements oo shabahaya saamaynta Dianabol by a abuuro jawi xoog dhiska murqaha si ay u koraan iyo kordhinta haynta nitrogen. Marka daama, waxay shabahaya falalka daroogada weli ku jira ma profile dhabta steroid.
Hogaamiyaha Suuqa duurka this shaki la’aan waa D-Bal (ogsoonow goorna magaca) ka Jumlada Crazy – saaraha dheeri US a kaas oo oolin Lahjadaha sharciga ah ee badan oo ka mid ah steroids loo yaqaan heli karo.
Jawaab-celinta waa mid aad u fiican la leeyahay dadka isticmaala sheegtay saamaynta dhiska sida ugu fiican ee steroid dhabta ah laftiisa waa, iyada oo aan xayiraado ku saabsan yaa iibsan kartaa, oo aan ku sumowga meerkurida beerka.
Baakado ku jira 90 kaniini oo waa in la qaato 3 jeer maalin kasta cuntada xitaa maalmaha non-tababarka. wareegga A caadiga ah waa 2 bilood iyo 1.5 todobaad off.